Good To Know | MyanmarReferral
general knowledge, should know
အရက်နာကျခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ဖြေဆေး
January 1, 2012Posted by lathaphotoke	နံနက် အရက်နာကျ နေချိန်တွင် ခေါင်းကို မထူပါနှင့်။ ပျို့အန်နေလို့ မောနင်းပက်ပြီး ပြန် မဖြေလိုက် ပါနှင့်။ အရက် သောက်ခြင်းကို လုံးဝ ရပ်ထား လိုက်ပါ။ ရေနှင့် ဖျော်ရည်ကို တလှည့်စီ သောက်ပေးပါက တဖြည်းဖြည်း တည်ငြိမ်မှု ရလာပါမည်။ နေ့ ရက် ဆက်ပျော်ရွှင်ပွဲများတွင် စိတ်အလိုလိုက် အလွန်အကျွံ သောက်စားခြင်းမှ ရှောင်ရှားပါ။ အရက် နာကျပြီး ချာချာ လည် နေသူကို သစ်ရွက်သစ်ဖုများ၊ ရိုးရာ ဗိန္ဒောကုထုံး များဖြင့် ဖြေပေးတတ်ကြသည်။ အရမ်း ဇွတ်မလုပ်သင့်ပါ။ အမူး ပြေဖို့ထက် ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများဖြင့်ပိုမိုဆိုးရွားစေနိုင်သည်။ အရက်နာကျခြင်းအတွက် အကောင်းဆုံး ကုနည်းမှာ ကြို တင်ကာကွယ်ခြင်းဖြစ်သည်။
အမေရိကန်သမားတော်များအဖွဲ့ဥက္ကဋ္ဌ ဒေါက်တာ Charles Cutler က “အရက်နာကျသူတွေအတွက် အဆိုးဆုံး ...	Posted in Good to know
TB and Infertility တီဘီဆေးနဲ့ ကလေးမရတာ
December 26, 2011Posted by lathaphotoke	2011/8/8
ကျွန်တော့် နာမည် (့) ဖြစ်ပါသည်။ အသက် ၂၄ နှစ်ရှိပြီး နေတာကတော့ (့) ကပါ။
(၁) TB ရောဂါပိုး ပျောက်ဆေး။ TB ဆေးစားနေချိန်မှာ ကိုယ်ဝန်ယူလို့ ရပါသလား။ နောက်ပြီး သူများတွေ ပြောတာ TB ဆေးက ပြင်းလို့ Sperm ပိုးတွေပါ သေကုန်တယ်၊ ကိုယ်ဝန်ယူလို့ မရဘူးလို့ ပြောကြတာ ဟုတ်ပါသလား။
(၂) မြန်မာပြည်မှာ တားဆေး အမျိုးမျိုး ရှိပါသည်။ တားဆေးတွေထဲမှာ ဆိုင်မှာ မေးကြည့်တော့ ဆေးနာမည် Ecee2 တားဆေးက အကောင်းဆုံးလို့ ပြောပါတယ်။ အဲဒီဆေးမှာ ၂ လုံးပါ ပါတယ်။ တပြိုင်ထဲ တိုက်လို့ ရတယ်လို့ ပြောပါတယ်။ တချိ့ကလဲ ၁၂ နာရီ ခြားပြီး တိုက်ရတယ်လို့ ...	Posted in Good to know
Genital Clamydial infection
December 26, 2011Posted by lathaphotoke	လိင်လမ်းကြောင်း (ကလာမိုင်ဒီးယား) ပိုးဝင်ခြင်း
• STD လိင်ကတဆင့် ကူးစက်ရောဂါ ဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ ဆီးထွက်ပြွန်၊ မိန်းမတွေမှာ သားအိမ်ဝ၊ ဆီးထွက်ပေါက်တွေမှာ ဖြစ်တယ်။ ဒီလမ်းကြောင်းရဲ့ အထက်ပိုင်းမှာ ဖြစ်နေတာတွေနဲ့လဲ တွဲနေနိုင်တယ်။
• အမျိုးသမီး ၈ဝ%၊ အမျိုးသား ၅ဝ% တွေမှာ ရောဂါလက္ခဏာ မရှိကြဘူး။ ပိုးတွေတော့ ရှိနေမယ်။
• ဖြစ်ရာနေရာတွေကနေ အထက်-တခြားရောက်သွားစေနိုင်တယ်။
• မိန်းမတွေမှာ PID ခေါ်တဲ့ တင်ပါးဆုံကွင်းထဲက အင်္ဂါတွေ ရောင်တာ ၃ဝ-၄ဝ% ဖြစ်နိုင်တယ်။ Tubal infertility ကလေးမရတာ ၁၁% မှာ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
• ယောက်ျားတွေမှာ Epididymo-orchitis ကျား အစိ-အကျော ရောင်တာ ဖြစ်နိုင်တယ်။
• မျက်စိမှာ လာဖြစ်တာလဲ ရှိတယ်။
• မအေမှာ ရောဂါရှိနေလို့ မွေးလာတဲ့ကလေးမှာ Neonatal ...	Posted in Good to know
December 26, 2011Posted by lathaphotoke	(ဗဂျိုင်းနား) (ဗက်တီးရီးယား) ဝင်ခြင်း
• Candidiasis မှိုဝင်တာထက် ၂ ဆ ပိုအဖြစ်များတယ်။ (ဗဂျိုင်းနား) ထဲမှာ ရှိနေကြ Lactobacillius species တွေ ရှိနေရာကနေ Anaerobic bacteria (ဗက်တီးရီးယား) တွေ များလာတာ ဖြစ်ပါတယ်။
• စစ်ဆေးရင် မွေးလမ်းကြောင်း နံရံမှာကပ်ပြီး အဖြူ-မီးခိုးရောင် အရည်တွေ ဆင်းမယ်။ အနံ့နံတယ်။ Fishy amine order ခေါ်တယ်။ ငါးညှီနံ့လို နေတယ်။ လိင်ဆက်ဆံချိန်မှာ အနံ့ပိုဆိုးတယ်။ pH နိမ့်နေမယ်။ အက်စစ်ဓါတ် ကဲနေတာကို ပြောတာ။
• ဖြစ်နေသူ ၅ဝ% က လက္ခဏာ မရှိကြဘူး။ ပိုးတွေတော့ ရှိနေမယ်။
• ဘာလို့ ဖြစ်ရတယ် ဆိုတာကို အထောက်အထားနဲ့တော့ အတိအကျ မပြောနိုင်သေးဘူး။
• ဖြစ်နိုင်ခြေ ...	Posted in Good to know
Nipples light up the same area of female brain as genitals do
December 26, 2011Posted by lathaphotoke	အမျိုးသမီးများ ရင်သားထိပ်ဖျားဟာလဲ လိင်အင်္ဂါတွေလို အတူတူ ဦးနှောက်မှာ သက်ရောက်တယ်ဆိုတာကို အမျိုးသမီးတွေရဲ့ ရင်သား-ထိပ်ဖျား Nipples ကို ထိကိုင်တာ လုပ်ပေးရင် လိင်စိတ် နိုးထစေတာ လူတိုင်း သိပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘာကနေ ဘယ်လို ဖြစ်ရတယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်တွေက ရှင်းမပြနိုင်ခဲ့ဘူး။ အခု သုတေသန တခုက ရှင်းပြလိုက်ပြီ။
အမေရိကားမှာ ရှိတဲ့ Rutgers University က စိတ်ပညာရှင် တွေ့ရှိလာတာက အမျိုးသမီးတွေ ရင်သား-ထိပ်ဖျားကို Aroused နှိုးဆွ ပေးရင် သုတို့ရဲ့ Genitals လိင်အင်္ဂါကို အဲလို လုပ်တဲ့အတိုင်း ဦးနှောက်ရဲ့ နေရာတူမှာ လာသက်ရောက်စေတယ် တဲ့။
အမျိုးသမီးတွေကို သူတို့ဖါသာသူတို့ နို့ကို နှိုးဆွခိုင်းပြီး Brain scans ရိုက်စစ်တဲ့အခါ Vagina ဗဂျိုင်းနားနဲ့ Clitoris ...	Posted in Good to know
STDs/STIs General Recommendations
December 26, 2011Posted by lathaphotoke	STDs/STIs General Recommendations
Chlamydia trachomatitis ဗက်တီးရီးယား ကနေဖြစ်တယ်။ ယောက်ျားတွေမှာ Epididymitis ...	Posted in Good to know
December 11, 2011Posted by lathaphotoke	Posted in Good to know
December 9, 2011Posted by lathaphotoke	Q: မရှင်းတာလေး ၁ခုလောက်ရှိလို့ မေးခွင့်ပြုပါဆရာ။ ဝမ်းဗိုက်၏ ညာဘက်ချက်အောက်ဘက်က ဗိုက်အောင့်တိုင်း အူအတက် ဖြစ်နိုင်ပါသလား။ အမြဲတမ်း မအောင့်ပဲ တခါတလေမှ အောင့်ပြီး ၁၅ မိနစ်လောက်နေလျှင် ပြန်ပျောက် သွားပါတယ်။ အောင့်လျှင်လည်း ခါးကုန်းနေသည်အထိ အောင့်ပါတယ်။ အူအတက် သို့မဟုတ် မည်သည့် ရောဂါ ဖြစ်နိုင်ပါသလဲ။ မည်သို့ ကုသ၍ ရနိုင်ပါမည်ကိုလဲ ကျေးဇူးပြု၍ ညွှန်ကြားပေးစေလိုပါတယ် ဆရာ။
A: အူအတက်ရှိတဲ့နေရာကို အပြင်ကနေ အတိအကျသိချင်ရင် စိတ်ကူးမျဉ်းဆွဲရတယ်။ “ချက်” ရယ်၊ “တင်ပါးဆုံရိုးပြား ထိပ်နေရာ” ရယ်ကို မျဉ်းတကြောင်းဆွဲပါ။ အဲဒီနေရာဆိုတာက ခါးဘေးအောက်၊ ပေါင်အထက်မှာ လက်နဲ့စမ်းရင် အရိုးမာမာ ဘုကလေးလို ရှိနေတဲ့နေရာပါ။ ပိန်ပိန်-ဝဝ စမ်းလို့ရတယ်။ တင်ပါးမှာ ဆေးထိုးတဲ့အခါ အဲဒီအရိုးစွန်းလေးကို လက်မနဲ့ စမ်းပြီးထိုးတာ ...	Posted in Good to know
December 9, 2011Posted by lathaphotoke	Jan 10, 2011 at 8:20 PM
သုတေသနတွေ လုပ်ထားပါတယ်။ ကိုယ်ဝန်ဆောင် လေယာဉ်မယ်လေးတွေကို စမ်းတော့ ပဌမ ၃ လအတွင်း ကိုယ်ဝန် ပျက်တာ နဲနဲပိုများတာက လွဲရင် ...	Posted in Good to know
December 9, 2011Posted by lathaphotoke	၁။ မိခင်လောင်းတွေအတွက် ဖတ်စရာတွေ
9. ...	Posted in Good to know
November 18, 2011Posted by lathaphotoke	The 40 Best Age-Erasing Superfoods
vitamin E, which ...	Posted in Good to know
November 4, 2011Posted by lathaphotoke	These types of bulbs which are called Energy Saving or low Energy bulbs, if broken, cause serious danger!So much so, that if one breaks, everybody will have to leave the room for at least 15 minutes, because it contains Mercury (poisonous) which causes migraine, disorientation, imbalances and different other health problems, when inhaled.It causes many ...	Posted in Good to know
| Tagged Energy Saving bulbs | Leaveacomment
November 2, 2011Posted by Zoe	Take two tablespoons of cinnamon powder and one teaspoon of honey inaglass of lukewarm water and drink it. It destroys the germs in the bladder..	Posted in Good to know
| Tagged Bladder Infections | Leaveacomment
အဖြူရောင်သံစဉ်နားဆင်ရန်	BBC Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)Saturday MorningFriday MorningThursday Morning:Wednesday Morning: RFA Broadcast (တိုက်ရိုက်နားဆင်ရန်)အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-25 01:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-24 17:29အာရ်အက်ဖ်အေ နေ့စဉ် အသံလွှင့် အစီအစဉ် 2013-05-24 14:29DVB TV broadcast	DVB TV - DASSK press in parliament 22.05.2013	National League for Democracy TV	PC-US Ambassador at large	Archives	Select Month March 2012 (1)
MYANMAR CALENDAR	ကြက်သားဆန်လှော်
ကြက်သားကို သန့်စင်အောင်ဆေးပါ၊ အရွယ်တော် အတုံးလေးတုံးပြီး ဆားအနည်းငယ်နဲ့ နယ်ထားပါ။ အရွက်တွေကိုလည်း သန့်စင်ထားပါ။ ဆီကို ထမင်းစားဇွန်း တစ်ဝက်လောက် ထည့်ပြီး ဆီပူပူမှာကြက်သားကို လှိမ့်လိုက်ပါ။
ဖက်ဖယ်၊ ပင်စိမ်း၊ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်နဲ့ ဆန်လှော်မှုန့်ထည့်ပြီး မွှေပါ။ ကြက်သား မကျက်တကျက် အနေအထားလောက်ဆို ရေနွေး အနည်းငယ် ထည့်ပြီး အဖုံးဖုံး ထားလိုက်ပါ။
ကြက်သားလည်းကျက်ပြီ အရသာလည်း အနေတော်ဖြစ်ပြီဆိုရင် အဖုံးဖွင့်ပြီး နံနံပင်နဲ့ ငရုတ်သီး (ထက်ခြမ်းခွဲ) ထည့်ပြီး ဟင်းအိုးကို မီးဖိုပေါ်က ချလို့ရပါပြီ။
Top ArticlesMyanmarCelebrity	Academy May Than Nu Opens 1st Lady Beauty Salon	MTV	Yin Ko Phwint Lite Sann - SHE	VOA Burmese TV	Burmese TV Update 05-24-13	>